အဆိုပါ 30 နေ့အခမဲ့စမ်းသပ် Clickfunnels - Funnel Of The Day
အဆိုပါ 30 နေ့အခမဲ့စမ်းသပ် Clickfunnels
အဆိုပါ 30-တစ်ရက်အခမဲ့အစမ်း Clickfunnels တစ်ဦးကို flash ရောင်းချပူဇော်သက္ကာထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်.
ဒါဟာသူတို့ရဲ့အသုံးအနှုန်းများအပေါ်လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်ရှိနေခြင်းတည်ဆောက်မယ့်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း၏ကွဲပြားတဲ့ function တွေနဲ့တီထွင်နေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုမြှင့်တင်ရန်တစ်လမ်းဖွင့်ထားတဲ့.
ရိုက်ယူခြင်း ၏ကမ်းလှမ်းမှုကို 30 တစ်ရက်ရုံးတင်စစ်ဆေး အပြည့်အဝကို web hosting အတွက်မှတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်, ဆင်းသက်စာမျက်နှာတည်ဆောက်ဆွဲခြင်းနှင့်ကျဆင်းနေ, မိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှုစာမကျြနှာ, ကနေရှေးခယျြဖို့တင်းပလိတ်များ၏ကြီးမားသောစုဆောင်းမှု, A / B အုပ်စုခွဲစမ်းသပ်ခြင်း, One-click နှိပ်ပြီး upsells, ငွေပေးချေမှုအပြောင်းအလဲနဲ့, လူမှုကွန်ယက်အကောင့်များဖြင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအားဖြင့်မောင်းနှင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကတော့, အဖြစ် webinar ကတော့.
ဒါကင် $97 အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုတန်ဖိုးရှိ!
ယခု Clickfunnels သင့်ရဲ့မိတ္တူရလာကြ ဒီမှာ
ဒါကြောင့်, တစ်ဦးကလေးထိန်းမရ, ချွတ်အလုပ်လုပ် ယူ. သင်ဤအထူးလက်လွတ်မသေချာအောင် တစ်ကြိမ်ကမ်းလှမ်းမှု.